Ibsa HD ABO Jaal Daahud Ibsaa guyyaa har’aa – RA'YI
Ibsa HD ABO Jaal Daahud Ibsaa guyyaa har’aa
RA'YI	Uncategorized	 December 22, 2018 3 Minutes
“Seerri hunda keenya ol ta’ee seera kabajuu kanarratti walii galtee gone!” Jechuun jalqaban HD ABO Jaal Daahud Ibsaa har’a gaazixeessitootaaf ibsa kennaniin.
Erga sochiitti seennee ji’a afur ta’ee jira, ji’i afur dheeraadhas gabaabaadhas
Walta’iinsi keenya maali?
Karaa keenyaa jijjiirama kana kan fide miseensota keenya miseensota Waraana Bilisummaa Oromoo, uummata keenyaafii addattimmoo dargaggoota Qeerroo Bilisummaa Oromoo isaan kun wareegama ulfaataa waggoota darban kana keessatti godhaniin, haala kanaan jijjiirama kana keessa nu seensisan hunda keenya. Kana keessatti wareegamni ulfaataan as gahe kana keessaa qooda fudhachuun jijjiirama dimikiraasii aangoon harka uummataa gale kan uummatni dheebotiif qabsaa’otni dheebotan, uummatni bakka bu’ootasaa filatee aangoo polotikaa akka harkasaa galfatu, mootummaa uummataan filamee uummataan bulu, kan uummataaf abboomamee hawwii jijjiirama ammaa kana warra fidaniiti. Kana kabajnee inni tokko abbaa itti ta’ee polotikaal paartii, EPRDF haa ta’uu Adda Bilisummaa Oromoo inni kaan ammoo achi karkarfamee ilma hormaa ta’ee abbaa buddeenaa ta’uu osoo hintaanee, uummati keenya abbaa jijjiirama kanaa ta’uu amannee, isa kana hojoorra oolchuuf hundi qooda akka fudhatuufii
Addi Bilisummaa Oromoo fi mootummaa Xoophoyaa gidduu waggaa 27 hariiroon ture hariiroo lolaatii. Lola kana kan labse EPTDF dha; uummata Oromoo fi Adda Bilisummaa Oromoo irratti. Kanaaf har’a EPRDF jijjiirama kana ofitti fudhatee jijjiirama kana of keessa godhee, jijjiirama kanaaf abboomamee gara fuulduraatti nagaadhaan akka hojjetamu ka jijjiirama kana ofitti fudhate waan ta’eedhaaf isa kana irratti walii galuudhaan lola kana dhaabuu. Lola dhaabuu jechuun; gara nagaatti deemuu kana wal taaneerra jechuudha. Lola dhaabuu kanas labsine, lola dhaabuu kana wajjin kan deemuu humna waraanaatii jechuudha. Humni waraanaa ka mootummaa in jiraa, ka qabsoo irra ture ka qabsoo hidhannoo irra ture Adda Bilisummaa Oromoos haa ta’u dhaaboti biraan kan of harkaa qaban isaan kun qoodisaanii maal ta’a? ka jedhuu. Dhooboti biraan mootummaa wajjin ka isaan ilaaluun walta’iinsa godhuu. Addi Bilisummaa Oromoos ka waraana Bilisummaa ilaaluun walta’iinsa godhaa jechuudha. Haala kana keessatti waa’ee waraanaa:
Tokkoffaa: waraanni mootummaa Xoophiyaa, caasaan tikaa, caasaan federaal poolis, caasan poolisii mootummaalee naannolee isaan kun kanaan dura paarti tokkicha EPRDF’n abboomamaa waan turaniifii dantaa mootummaa EPRDF hojiirra oolchaa kan turan ka mootummaa ta’uu fi seeraan kan socho’aniis seera kabajan ta’uu akka nuu mirkaneessan kana wal haasofnee tole jedhanii fudhatani jechuudha. Karaa keenyammoo waraanni Bilisummaa Oromoo WBO’n akkam ta’a jennee lamaan keenya wal haasofnee, qaama nageenya Oromiyaa akkaataa itti inni ta’u kanarratti sirnaasaa warra beekumsa akkasii qaban wajjin gargaarsifachuudhaan nu laman isa kana akkaataa itti qaama nageenyaa ta’u irratti hojjenneetii, hojiirra oolchina kan jedhu isa kana irratti wal taane jechuudha.
Dhimmoota biraa ka ka’anii kanneen qabsoo kana keessatti dhabaman bakka isaanii baruu, mootummaan ifa akka godhu; darbeemmoo kanneen mirga ilma namaa dhiituu keessattiifii lubbuu hedduuf gaafatamaa ta’an kana akkaataa itti seeraan gaafatamanii fii sirnisaa tofamee seeratti dhiyaatan kana irratti hojjenna kan jedhu
ka arfaaffaa fii baay’ee barbaachisan sirna ce’umsaa kana keessatti hundi keenya qooda qabaannee, kanas walii ifa goonee kana irratti waliin hojjetuu. Jijjiirama kana bakkaan gahuu keessatti waliin hojjetuu ka jedhudhaa jechuudha. Kunneen warra gurguddoodha malee xixiqqaanis jiru. Isa kana keessatti keessattuu ka waraanaa hojiirra oolchuu keessatti. Ka jalqabaa Koree waloo walii ijaarama jedhamee; kunii waraana kana bakka leenjii fudhatu waliin murteessinee leenjii kana keessatti waliin hordofuu fi fiixa baasuu ka jedhudhaa. Koreen waloo kuni
Kanaafis kan inni baratuu qabuuf waaninni baratuu qabu ka tarrisan keessaa: isa kana barnoota siyyaasaa paartii tokkoo kan isaan itti dabalan keessaa bahuu qaba, barnoota siyyaasaa paartii tokkoo barachuuf miti waraanni mootummaa kan mootummaati kan jedhu irra dhaabbannee waraana Eertiraadhaa dhufe nama kuma tokkoof dhibba sadii kan ta’u, 1300 harka keenyaan mootummaatti kenninee. Mootummaatti kennuu keessatti waraanni kun as dabarfamee Araayiitaa Arsii keessa qubachiifamee, Ardaayitaa Arsii keessa qubachiifamuu keessatti guyyaa qubachiifamerraa jalqabee koreen Waloo leenjisa isaaf barsiisa isaa akkasuma ramaddiisaaf waliin tihanna kan jennee lafa kahanne cabsuudhaan hogganni Adda Bilisummaa Oromoo….
Sababa network guutuusaa argachuu dhanuu keenyaaf nu ofkalchaa! Akka arganneen isiniin geenya!
Qalbeessaa Dhangi’aa akka barreessetti!
Previous Post Ishooo ishoooo ishooo
Next Post ESAT NEWS TOWARDS ODP AND OLF CONFLICT
One thought on “Ibsa HD ABO Jaal Daahud Ibsaa guyyaa har’aa”